एमसीसी अनुमोदनपछि आत्तियो चीन, चिनियाँ स्वार्थ केन्द्रित प्रस्तावसहित जिङपिङका दुत आउँदै — Imandarmedia.com
एमसीसी अनुमोदनपछि आत्तियो चीन, चिनियाँ स्वार्थ केन्द्रित प्रस्तावसहित जिङपिङका दुत आउँदै
काठमाडौं। उत्तरी छिमेकी चीनले उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं पठाउने भएको छ। संसदबाट अमेरिकी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएपछि चिन्तित बनेको बेइजिङले विदेशमन्त्री वाङ यीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय टोली पठाउन लागेको हो।
चैत दोस्रो साता दुईदिने भ्रमणका क्रममा ६ सदस्यीय चिनियाँ उच्च टोली काठमाडौं उत्रिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। चिनियाँ टोलीले एमसीसीलाई कार्यान्वयन हुन अवरोध हुनेगरी नयाँ प्रस्ताव बीआरआई कार्यान्वयन ल्याउन लागेको हो।
नेपालले हालैमात्र अमेरिकी सहयोग अनुदान मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पारित गरेसँगै त्यसको विरोधमा रहेको बेइजिङले विदेश मन्त्रीलाई नेपाल पठाउन लागेको हो।
चीनले एमसीसी पारित गर्न नहुने भन्दै लबिङ गर्दै आएको थियो। एमसीसी गत फागुन ८ गते संसदमा पेश भएसँगै त्यसलाई रोक्नसमेत चीनले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरुलाई सम्पर्क गरेर एमसीसी पारित नगर्न दबाब दिएको थियो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रीले पटक पटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै बेइजिङमै कसैले दबाबमा दिएको उपहार पनि लिन्छ ? भन्दै नेपाललाई भड्काइरहेका थिए। नेपालले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा चीन र अमेरिकाबीच वाकयुद्ध नै चलिरहेको थियो।
तर एमसीसी पारित गरेपछि चीनले ‘नोट गरेको’ मात्र प्रतिक्रिया दिएको थियो। एमसीसी पारित नै भएपछि अब भने चीनले नेपालले यसअघि सहमति जनाएको बीआरआई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ लाई अगाडि बढाउनका लागि नेपाल आउन लागेको बुझिएको छ।
चीनले चर्को मूल्यमा ऋण दिएको आरोप लागिरहेका बेलामा बीआरआईमार्फत नेपाललाई जोड्नका लागि चिनियाँ विदेश मन्त्रीको टोली नेपाल आउन लागेको बताइन्छ।
तेस्तै, नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले नेपालको हितका लागि आवश्यक रहेका कारण पार्टीले प्रतिपक्षमा हुँदा पनि अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीको वकालत गरेको बताएका छन्।
काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत महानगरपालिका ३१ को शंखमुलमा बुधबार बिहान आयोजित बुथ कार्यसमिति गठन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमसीसी नेपालको हितका लागि आवश्यक भएका कारण वकालत गरिएको बताएका हुन्।
एमसीसी नेपालको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याोउने काममा लगानी हुन थालेका कारण, नेपालको आवश्यकताअनुसार डिजाइन गरेका कारण नेपालको हितमा रहेको हुनाले आवश्यक छ भनेर कांग्रेसले सरकार र विपक्षमा हुँदा वकालत गरेर हिँडेको हो।
नेता सिंहले भने। उनले सरकारमा हुँदा एउटा र सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्को कुरा गर्न नमिल्ने पनि जिकिर गरे। एमसीसीका बारेमा राष्ट्रघाती भनेर गलत प्रचार गरियो, सिंहले भने, राष्ट्रघाती भए संघीय संसदबाट पास हुन्थ्यो त ?
सरकारमा रहँदा अगाडि बढाउने, सरकारबाट हटिसकेपछि विरोध गर्न थाल्ने? यसरी त मिल्दैन नि। उनले एमसीसीका बारेमा भ्रम छर्नेहरुले हुँदै नभएको कुरा गरेर इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेकोप्रति आपत्ति जनाए।
एमसीसीका बारेमा गलत प्रचार गर्नेहरुले नेपाल आईपीएसको अंग बन्यो भनेर भ्रम छरे, नेता सिंहले भने, नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्न नीतिमा आधारित छ। यसलाई हामीले छाडेका छैनौँ। नेपाल अमेरिकी एक्सिसमा गयो।
असंलग्ग नीति बिर्सियो भनेको छ, त्यो बिल्कुलै होइन। नेता सिंहले पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ताले नागरिकको घरघरमा पुगेर बास्तविकता बुझाउँदै कांग्रेसलाई मत दिन, जिताउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए।